Noma ngiwagcwalisile amafomu wokuxhumana, ngangizizwa ngikhathazekile. Ingabe lezi bekuyizinkampani ezisemthethweni? Ngingabethemba ngemali yekhasimende lami? Ingabe bazokwenza umsebenzi omuhle? Ikhasimende lami lifuna umuntu wasendaweni - ngabe batholakala e-Indianapolis?
Ngemuva kwalokho, ngithole okunye ukuhanjiswa ku-Twitter kusuka UPaula Henry. Ungidlulisele enkampanini. Lapho ngiya kuwebhusayithi yenkampani, ngathengiswa. Nakhu ukuthi kungani: